Ngaba uyazi ukuba kukho igolide yokwenene ngaphakathi kwi-smartphone yakho?
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ngaba uyazi ukuba kukho igolide yokwenyani ngaphakathi kwi-smartphone yakho?
Ngaba uyazi ukuba kukho igolide yokwenyani ngaphakathi kwi-smartphone yakho?
Ukuba kukho umbala omnye okhoyo ohamba phambili phakathi kwee-smartphones ngoku, iya kuba yigolide. I-LG, i-HTC, kunye ne-Samsung zonke sele zibhengeze imibala eyahlukeneyo yegolide kwiifowuni eziphathwayo emva kokuba iApple iqale umkhwa ngee-iPhone zayo ezi-5. Nangona kunjalo, ubusazi ukuba bekukho igolide yokwenene ngaphakathi kwazo zonke ii-smartphones? Isinyithi esikhazimlayo sisetyenziselwa ikakhulu ukufaka iingcingo ngaphakathi kwiichips ngenxa yokuqhuba kakuhle kunye neepropathi zokungasebenzi kakuhle. Oku kuyivumela ukuba iqhube imiqondiso ngokukuko kuyo yonke intambo ecekeceke ye-chip. Ngaphaya koko, igolide ayisiyo & apos; kuphela kwesinyithi esixabisekileyo esinokufumaneka ngaphakathi kweefowuni ezininzi kunye neetafile. Isilivere kunye neplatinam zikwasetyenziswa kwii-smartphones, kunye nenani lezinto ezinqabileyo kwaye kunzima ukufumana isinyithi.
Ke kutheni ii-smartphone ezingabizi kakhulu emva koko? Ewe, loo nto kukuba akukho & apos ayinayo yonke igolide, isilivere kunye neplatinum kuzo. Kuqikelelwa ukuba i-iPhone iqulethe malunga nee-ounces ze-0.0012 zegolide, ii-ounces eziyi-0.012 zesilivere, kunye nee-ounces ze-0.000012 zeplatinam. Ezi zixabisa iidola eziyi-1.52, $ 0.24, kunye ne- $ 0.017 ngokwahlukeneyo. Ewe kunjalo, kukho iapos yeqela lezinyithi ezingabalulekanga kangako ezifumaneka ngaphakathi kweefowuni. I-iPhone, umzekelo, ibambe malunga neesenti ezintlanu zealuminiyam kunye neesenti ezili-12 zexabiso lobhedu.
Ezi zixa zeentsimbi ezixabisekileyo ngaphakathi kwi-smartphone zinokubonakala ngathi zincinci, kodwa nantsi iapos yinyaniso enomdla: itoni yee-iPhones inokuvelisa igolide engaphezulu kwetoni yegolide. Ngaphezulu kwamaxesha angama-300 ngaphezulu, ngakumbi ngakumbi. Kuyafana nakwezinye izinto, nangona amanani engekho kwaye ayothusi. Umzekelo, amaxesha angama-6.5 ngaphezulu kwesilivere aqulathwe kwitoni yee-iPhones kunale inokutsalwa kwitoni yesinyithi sesilivere. Kungenxa yoko le nto ukuphinda kusetyenziswe kwakhona ii-smartphones, iipilisi, kwaye nangalo naluphi na uhlobo lwezixhobo ze-elektroniki ezingasasetyenziswayo kwakhona zenza ingqiqo enkulu.
Ke kwixesha elizayo xa ufikelela kwi-smartphone yakho, nokuba yenziwa njani okanye yimodeli, musa ukuyijonga njengeplastiki, ialuminiyam, okanye iglasi. Kukho iapos yegolide yokwenene apho! Nesilivere. Kwaye lonke iqela lezinye izinyithi ezinqabileyo zomhlaba enibe ninazo lonke ixesha.
Ityala lesikhumba le-S6
I-hotspot ye-iphone 6 Sprint
pixel 4a vs isimboli somoto g
Ezona meko zibukhali nezikhuselekileyo ze-iPhone 8, 8 Plus, kunye ne-iPhone X ukuza kuthi ga ngoku
I-Apple iPhone X: Nazi iiapos zeendleko zemveliso eqikelelweyo
Idili: I-Samsung Galaxy S8 kunye ne-S8 + zi- $ 150 ezingabizi kwi-Best Buy
I-Apple iPad mini 2 kunye neGoogle Nexus 7
I-LG Bukela i-Urbane yesi-2 yoHlelo lwe-LTE inomcimbi wehardware, ukuthengisa kumisiwe
Ekuqhubekeni ukuya kwizivumelwano zabo zoLwesihlanu oMnyama we-2019, iAmazon kunye neWalmart zithatha iApple kunye neapos yexabiso lokubukela
I-Apple iPhone 8 vs Samsung Galaxy S8